20 Chaizvoizvo Chakadzika Winnie-the-Pooh Makotesheni Kuti Akunyemwerere - Quotes
20 Chaizvoizvo Chakadzika Winnie-the-Pooh Makotesheni Kuti Akunyemwerere
Zvichida isu vanhu vakuru tinofanirwa kutarisa nzvimbo dzezvinyorwa zvevana, TV nefirimu kamwechete mune imwe nguva nekuti kune huwandu hunoshamisa hwehungwaru hunofanira kutorwa kubva kwavari.
Munyori A.A. Milne akagadzira vamwe vevanonyanya kufunga uye vakadzika paakanyora zvinyorwa zvake zveWinne-the-Pooh uye mazhinji emakotesheni akaberekwa mairi ane zvidzidzo zvehupenyu zvatinogona kudzidza tese kubva.
Mimwe yeiyi, uye mimwe kubva kune yakatevera animated adaptations, inogona kuwanikwa pazasi. Ukangotanga kuaverenga, unozofuridzirwa nekudzika uye kuzere kwezvinoreva ivo.
Kana iwe uri mubereki, pamwe iwe unofanirwa kufunga kuteedzera pasi mabhuku, maTV akatevedzana, uye mafirimu kuti usume vana vako kune zvishamiso zvebere iri musango. Parizvino, nakidzwa neaya makumi maviri Winnie-the-Pooh makotesheni.
Ini ndinokurudzira kubata kopi yeTao yaPooh sezvo iwe pasina mubvunzo uchainakidzwa kana iwe uchifarira makotesheni pazasi. Heino chinongedzo kwairi paAmazon.com uye unogona uzviwane pano paAmazon.co.uk
'Unoperetera sei 'rudo'?' - Nguruve
'Hausi kuperetera ... unozvinzwa.' - Pooh
Pane kuvimba kugona kwako kubata chero chinhu:
Ndivimbise kuti uchagara uchirangarira: Iwe wakashinga kupfuura zvaunotenda, uye wakasimba kupfuura zvaunoratidzika, uye wakangwara kupfuura zvaunofunga.
Pamusoro pekukosha kwezvinhu zvidiki:
Dzimwe nguva, akadaro Pooh, zvinhu zvidiki zvinotora nzvimbo yakanyanya pamoyo pako.
'Iro nhasi,' Akakwenya Nguruve.
'Zuva randinofarira,' akadaro Pooh.
maitiro ekuzvikanganwira iwe pachako nechinhu chinotyisa
Pamusoro pekusagadzikana kwekufunganya:
'Tichifunga kuti muti wadonha pasi, Pooh, patakanga tiri pasi pawo?'
'Tichifunga kuti haina,' akadaro Pooh mushure mekufungisisa.
Nguruve yakanyaradzwa neizvi.
Pa kuziva nekungova:
Dzimwe nguva, kana ukamira panjanji yepasi pebhiriji ukazendamira pamusoro kuti utarise rwizi ruchiyerera zvishoma zvishoma pasi pako, iwe uchangoerekana waziva zvese zviripo kuti zvizivikanwe.
zvinoratidza kuti anokufarira
Zvinhu zvinoita kuti ndisiyane ndizvo zvinhu zvinondiita.
Pane musiyano uripo pakati pezivo nekunzwisisa:
'Kungwara kwetsuro,' akadaro Pooh achifunga.
'Hongu,' akadaro Nguruve, 'akangwara Tsuro.'
'Uye ane Brain.'
'Hongu,' akadaro Nguruve, 'Tsuro ane Uropi.'
Pakamboita runyararo kwenguva refu.
'Ndinofunga,' akadaro Pooh, 'ndosaka asingambonzwisise chero chinhu.'
Pakuziva kuti iwe haudi mumwe munhu kuti akupedze iwe:
Ndakanga ndichifamba ndichitsvaga mumwe munhu, uye ipapo kamwe kamwe ndakanga ndisisipo.
Mamwe makuru makuru ekuunganidzwa (Pooh makotesheni anoenderera pazasi):
13 Zvakakwana Hupenyu-Inosimbisa Mhepo Mune Iyo Willows Quotes
25 Zvinoshamisa Whimsical Alice Mune Wonderland Quotes Kuti Urarame Hupenyu Na
Rudo ruri kutora nhanho shoma uchidzokera kumashure pamwe zvakatowanda ... kupa nzira kune mufaro wemunhu waunoda.
Nguruve akacherekedza kuti kunyangwe hazvo aive aine moyo mudiki kwazvo, unogona kubata huwandu hukuru hwekuonga.
Iwe haugone kugara mukona yako yeMusango uchimirira kuti vamwe vauye kwauri. Unofanira kuenda kwavari dzimwe nguva.
Pane kusanyanyisa kufunga:
Dzimwe nguva ndinogara ndichifunga, uye dzimwe nguva ndinongogara…
Pane kusava noudyire:
Kufunga kushoma, kufunga kushoma kune vamwe, kunoita mutsauko wese.
Pane hupfumi muhupenyu hwako:
Ndine rombo rakanaka sei kuva nechimwe chinhu chinoita kuti kutaura zvakanaka zvakanyanya.
Pakubvisa pfungwa dzako pane ese mafungiro:
Usatorere pasi kukosha kwekusaita chero chinhu, chekuenda chete, kuteerera kune zvese zvinhu zvausinganzwe, uye kwete kunetsa.
kutamba nesimba kuti uwane nemurume wako
Pamusoro pekukosha kwezviroto:
Ndinofunga isu tinorota saka hatifanire kuve takaparadzaniswa kwenguva yakareba. Kana isu tiri muzviroto zvemumwe nemumwe, tinogona kuva pamwe chete nguva dzese.
Pazvibatsiro zvekusagadzirisa zvese:
Imwe yemabhenefiti ekusave akarongeka ndeyekuti munhu anogara aine zviwanikwa zvinoshamisa.
Pamusoro pekunaka mukati mehunyanzvi:
Asi hazvisi nyore, akadaro Pooh. Nekuti nhetembo uye hums hazvisi zvinhu zvaunowana, ndizvo zvinhu zvinokutora iwe. Uye zvese zvaunogona kuita kuenda kwavanogona kukuwana iwe.
Pakuwana mufaro mune zvese:
Hapana munhu anogona kuve asina kuongororwa nebhaluni.
kana mukomana achitya manzwiro ake kwauri
mari mubhangi mari ins
musiyano uripo pakati perudo nerudo
chii chakaitika kubray wyatt